तिहारको आज लक्ष्मी पुजाः घरघरमा बत्ती नभिब्ने उल्यालो दिन – Kadar News : Oneline Digital News:
तिहारको आज लक्ष्मी पुजाः घरघरमा बत्ती नभिब्ने उल्यालो दिन
प्रकासित : २९ कार्तिक २०७७, शनिबार ११:१९
२९ कात्तिक, काठमाडौं । आज लक्ष्मी पूजा, यो पर्वलाई ‘उज्यालोको दिन’ भनिन्छ । आज साँझ र रातमा पनि यो दिन कुनै घरहरुमा बत्ती निभ्दैनन् । तर, चार वर्षअघिसम्म नेपालमा दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको भयावह अवस्था थियो । त्यसैले लक्ष्मी पूजाका दिन सबैतिर बत्ती बल्दैन थिए, जहाँ बल्थे, त्यहाँ झ्याप्प–झयाप्प काटिने–आउने गर्थ्यो ।
चार वर्ष पहिले ०७३ को तिहारमा अच्चमै भइदियो ! नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘झिलिमिली बत्ती नबाल्नू’ भन्ने सूचना नै
निकालेन । त्यसभन्दा अघिल्ला धेरै वर्षहरुमा पत्रिकाभरि छापिने त्यस्ता सूचना त्यो वर्ष नआउनुको कारण थियो, प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन र तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको योजना ।
२०७३ भदौको अन्तिममा प्राधिकरणका प्रमुखका रुपमा प्रवेश गरेका कुलमान घिसिङले कर्मचारीलाई तिहारमा त्यस्तो सूचना निकाल्न दिएनन् । उनले प्राधिकरणका विभागीय प्रमुखहरुलाई बोलाएर भनेका थिए, ‘उज्यालो पर्व तिहारमा बत्ती नबाल्नू भनेर के सूचना निकाल्नु ! बरु सकियो भने काठमाडौं र पोखरामा बिजुली नकाटिने गरी आवश्यक प्रवन्धहरु गरौं ।’
तिहारको लक्ष्मी पूजाकै दिनमा वर्षभरिकै सबैभन्दा बढी बिजुलीको माग हुन्छ । त्यसदिन काठमाडौंमा कतै लाइन नकाट्ने व्यवस्थाका लागि सबै तयारी गर्न लगाए उनले । र, लक्ष्मी पूजाकै दिनमा लोडसेडिङ हटाउन ‘परीक्षण’ गर्ने योजना तयार भयो ।
त्यसअनुसार घिसिङसहित प्राधिकरणका उच्च अधिकारीको टोली लक्ष्मी पूजाका दिनमा काठमाडौंको स्युचाटारस्थित विद्युत भारप्रेषण केन्द्रको कन्ट्रोल रुममा पुग्यो । टोलीले काठमाडौंमा त्यसदिनको मागको अवस्थालाई ‘रियल टाइम’ मा हेरिरह्यो ।
घिसिङले पूर्वयोजनाअनुरुप मागअनुसार आपूर्तिको प्रवन्ध गरेर काठमाडौंमा कतै ओभरलोडका कारण बिजुली नकाट्न प्राविधिकलाई निर्देशन दिए । साँझ छिप्पँदै र रात पर्दै जाँदा काठमाडौंको डिमान्डको उच्चतम् विन्दु ३१५ मेगावाट पुगेर तलतिर झर्न थाल्यो ।
विगतकै जस्तो ‘अँध्यारो अपेक्षित’ त्यो तिहारमा लक्ष्मीपूजाका दिनमा पनि उज्यालो नै भइरह्यो । प्राविधिक कारणबस फ्युज गएका कारण काठमाडौं महाराजगञ्जका दुईवटा घरमा बाहेक कतै पनि बिजुली बत्ती नबलेको सूचना प्राधिकरणमा अएन । पोखरामा पनि त्यस दिन बिजुली काटिएन ।
त्यसदिन भएको ‘चमत्कार’लाई थोरै काठमाडौंबासीले नोट त गरे, तर के कारणले बिजुली गएन भन्ने सोधखोज खासै भएन । तिहार सकिएलगत्तै खबरहरु आए, अब काठमाडौं लोडसेडिङमुक्त हुन्छ । खबरका हेडलाइनमा छाए, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ ।
जनार्दन शर्मा र कुलमान घिसिङ
यसले देशभर कुलमान चर्चाको पात्र बने । तर, उनले यो प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि ऊर्जामन्त्रालय र प्राधिकरणको ‘टिम इफोर्ट’का कारण सम्भव भएको बताइरहेका थिए । गत भदौमा कार्यकाल सकाएर विदा हुने बेलमा पनि नी त्यही कुरा
‘काठमाडौ लोडसेडिङ मुक्त भयो भनेपछि जनताबाट प्राप्त प्रतिक्रियाले थोरै इमोसनल पनि बनायो । त्यसकै प्रेरणामा हामीले क्रमसैँग देशभरको लोडसेडिङ हटाउन सक्यौं,’ कुलमान सम्झन्छन्,‘हामीले त्यतिबेला एक मेगावाट बिजुली थप्न र बचाउन कति मिहिनेत गर्यौं भन्ने प्राधिकरणको टिमलाई थाहा छ ।’
त्यतिबेला केही मेगावाट बिजुली थप्न डिजेल प्लान्ट चलाउनेदेखि उपत्यका र बाहिरको लोड व्यवस्थापनको लागि वितरणलाइनहरु सुधार्नेसम्मका काम रातारात भयो ।
प्राधिकरणले त्यतिबेला उपलब्ध बिजुलीलाई ब्यवस्थापनलाई नै बढी ध्यान दिएको थियो । बिजुलीको स्रोत विगतमा पनि त्यही थियो, लोडसेडिङ हटाउने समयमा पनि त्यही नै । सिस्टमलाई ब्यवस्थापन गर्ने कुरामा नै कुलमान र उनको टिमले जोड दियो । र, त्यसैअनुरुप प्रयत्न भयोे ।
असोजपछि नदीहरुमा बिस्तारै बहाब घट्दै जान्छ र माघ–फागुनमा सबैभन्दा न्यनतम् फ्लोमा पुग्छ । हिउँदमा बिजुलीको उत्पादन पनि निकै कम हुन्छ । अहिले आपूर्ति र माग साइडको म्यानेजमेन्टबाटै लोडसेडिङ व्यवस्थापन भएको थियो ।
अर्को विषय चाहिँ कसरी बिजुलीलाई समान वितरण गर्ने भन्ने पनि थियो । असमान तरिकाको वितरणका कारण पनि समस्या थियो । यसका लगि ब्यवस्थापन पक्षमा इमान्दारिता चाहिएको थियो ।
जनताको घरमा लोडसेडिङ गराएर उद्योगहरुलाई कमिसनकै भरमा २४ घण्टा नै बिजुली दिने कुरालाई कुलमानले स्वीकारेनन् । त्यसअघि प्राधिकरणको नेतृत्वले यस कुरामा इमान्दारिता देखाएको थिएन । त्यसैले पनि जनस्तरमा बिजुलीको संकट ठूलो देखिएको थियो । प्राधिकरणमा कुलमान आएपछि एकपटक पनि लोडसेडिङ तालिका निस्कएन भने थप उद्योगले २४ घण्टा बिजुली पाउने गरी डेडिकेटेड लाइन पाएनन् ।
कुलमानले प्राधिकरणमा आउनासाथै ‘डेडिकेटेड’ का नाममा अनियिमत तवरबाट बाँडिएका केही लाइनहरु काटिदिए । त्यो बिजुली नागरिकस्तरमा प्रयोग हुने गरी उनले सिस्टमभित्र ल्याए ।
प्राधिकरणले त्यतिबेला उपत्यकाबाहिर पनि लोडसेडिङ सेड्युल निकाल्न पनि बन्द गरिदियो । अधिकतम् ब्यवस्थापन गरेर सकेसम्म लोडसेडिङ नगर्ने प्रयत्न गर्यो । विस्तारै उपत्यकाबाहिर लोडसेडिङ हटाउँदै लागियो । नागरिकस्तरमा आशा जाग्दै गयो । जसले गर्दा प्राधिकरणले कम खपत गर्न गरेका सार्वजनिक अपीलमा नागरिकहरुले साथ र सहयोग गरे ।
लोडसेडिङ हटेपछि तिहारको बेला झिलीमिली पारिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय भवन
त्यतिबेला ‘लोडसेडिङ हुँदैन’ भनेर काठमाठडौंमा २४ घण्टा लाइन दिनासाथ इन्भर्टरहरु फूल चार्ज भएर बसे । जसले एकपटक फूल चार्ज भएका इन्भर्टर सिस्टमबाट हटेसरह भयो । त्यतिबेला काठमाडौंको सिस्टमबाट इन्भर्टर हट्दा २ सय मेगावाट बराबरको लोड घट्यो ।
त्यतिबेला सिस्टमको सही रुपमा सञ्चालन गर्नु नै निकै महत्वको विषय थियो । बेलुकाको समयमा ठूला पिकिङ जलबिद्युत गृहहरुको उपयोग गरियो । पानी रोकेर पिक समयमा कालिगण्डकी, मस्र्याङ्दी, त्रिशुली लगायतका प्लान्टहरु चलाइयो । यी आयोजनाबाट पानी स्टोर गरेर पिक हुन्छ ।
हिउँदमा कालीगण्डकीले दिउँसो ७० मेगावट दिए पनि बेलुका १ सय ४० मेगावाट दिन सक्छ । किनभने दिउँसो कम चलाएर बेलुका आवश्यक मागलाई मिट गर्ने गरी बिजुली निकाल्न सकिने कुरालाई प्राधिकरणले धेरै ध्यान दियो । बिहान पनि सिस्टम पिक हुन्छ । बेलुकाको करिब ९० प्रतिशत पिक बिहान हुन्छ । बिहानको पिकलाई रातिबाटै म्यानेज गर्ने क्रम पनि सुरु भयो । मध्यराति बिजुलीको डिमान्ड कम हुन्छ । यस्तै बेलुकाको पिकलाई दिउँसो होल्ड गरेर म्यानेज गर्ने काममा कुलमानले तदारुकता देखाए ।
प्राधिकरणले त्यतिबेला उद्योगको मागलाई ‘पिक आवर’मा व्यवस्थापन गर्यो । यसका लागि बेलुका उद्योगलाई बिजुली दिइएन । बेलुका ३ देखि ४ घण्टा उद्योगको बिजुली काटियो । लोडसेडिङ नहट्दासम्म कसैले ८ घण्टा, कसैले १२ घण्टा र कसैले लगातार पाएको अवस्था थियो । त्यो विभेद पनि हट्यो । सबै उद्योगले २० घण्टा पाए । ८ घण्टा पाउनेले पनि २० र २४ पाउनेले पनि २० घण्टा पाए पछि उद्योगहरु पिक आवरभन्दा बाहेककका समयमा चले । जसले सुरुकै वर्षमा देशमो औद्योगिक उत्पादकत्व बढ्यो ।
प्राधिकरणले बिजुली आयातको व्यवस्थापन पनि आवश्यक्ता अनुसार मिलायो । उच्च दरमा भारतबाट बिजुली आयात पनि
गरेन । प्राधिकरणले भारतबाट ४० मेगावाट थप बिजुली ल्याएर लोडसेडिङ हटायो ।
प्राधिकरणले डिमान्ड साइड व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दियो । डिमान्डलाई घटाउन सकिन्छ भनेर पिकलाई बल लगाएर घटायो । नागरिकहरुलाई बेलुकीको समयमा ठूला विद्युतीय उपकरण नचलाउन अपील गरियो । नागरिकले त्यसलाई स्वीकारे, जसले प्राधिकरणको टिमलाई माग व्यवस्थापनमा ठूलो भार परेन ।
विस्तारै उद्योगहरुलाई पनि २४ घण्टा नै विजुली दिन थालियो । तर, अपेक्षित दरमा उद्योगबाट पनि लोड थपिएन ।
लोडसेडिङ अन्त्यले देशको आर्थिक वृद्धिदरमा खास सहयोग गरेको छ । लोडसेडिङ हुँदाको भन्दा अहिले औद्योगिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुध्रिएको छ । नागरिकमा जलविद्युतमा नेपालले केही गर्न सक्छ भन्ने विश्वास पलाएको छ । लोडसेडिङ हटेर यो अवस्था सिर्जना हुनु भनेको सर्वसाधारणको भाषामा एउटा चमत्कार नै हो
२०७५ वैशाखबाट उद्योगमा भइरहेको लोडसेडिङ पनि हट्यो । त्यसअघि पनि उद्योगहरुले पर्याप्त बिजुली पाउने अवस्था बनिसकेको थियो ।
सकसका ती दिन
त्यो तिहारअघिसम्म लोडसेडिङका कारण देश चरम समस्यामा थियो । व्यवसायिक र औद्योगिक क्षेत्र निरुत्साहित थियो भने नागरिकले बेलुकाका समयमा विजुली पाउनु लगभग सपनाजस्तै भएको थियो ।
जब वर्षा सकिएर खोलमा पानीको सतह घट्दै जान्थ्यो, त्यसपछि प्राधिकरणमा हाकिमको टेबलमा लोडसेडिङ बढाउने प्रस्तावसहितको तालिका आइपुग्थ्यो । कुलमान कार्यकारी नियुक्त भएकै साता ‘लोडसेडिङ बढाउँदै बानी पार्नुपर्छ’ भन्दै फेरिएको तालिमा आएको थियो । तर, उनले त्यसलाई स्वीकृत गरेनन् ।
त्यसअघिसम्म कुनै सोचविचार नगरी योजनासम्म नबाई त्यो फाइल सदर हुन्थ्यो र पत्रिकामा विज्ञापनका रुपमा तालिका
त्यसैकारण उद्योगले बिजुली पाउँदा नागरिक अन्धकारमा रात बिताउँथे । पानी तान्नदेखि मोबाइल चार्ज गर्न पनि लोडसेडिङको तालिका हेर्नुपथ्र्याे ।
प्राधिकरणका पिकिङ आयोजनाहरु पिक आवरमा खासै चल्दैनथे । हिउँद याममा नै उत्पादन केन्द्रहरु मर्मतका लागि बन्द गरिन्थे । बिजुली जाँदा जनता मर्कामा पर्छन् भन्ने कुनै चिन्ता लिने कोही थिएनन् ।
लोडसेडिङले आक्रान्त भएका कारण शहरका घर–घरमा इन्भरर्टर थिए । व्यवायिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई जेनेरेटर नकिनी सुखै थिएन । जसले इन्भर्टर र जेनेरेटरको ब्यापार नेपाललको उत्कृष्ट सम्भाब्यता भएको व्यवसायमा गनिन थालेको थियो । २ सय मेगावाटसम्म विजुलीको माग इन्भर्टरहरुले बढाएका थिए । लाइन काटिने समयमा सबैतिर बिजुलीको लोड अत्यधिक भएर सिस्टम डाउन भएको भयै हुन्थ्यो ।
त्यतिबेला प्राधिकरणको मास्टर स्टेसनबाट इन्जिनियरहरु तालिका अनुसार नै प्रणालीको व्यवस्थापन गर्थे । आमनागरिकलाई पनि लोडसेडिङ हुनु र त्यसलाई झेल्नु नौलो थिएन ।
ऊर्जा मन्त्रालय पनि कागजकै योजनामा रमाइरहँदा उपलब्ध बिजुलीको व्यवस्थापनमा चुकेको थियो, सरकार । व्यापारी र उद्योगपतिलाई साँठगाँठमा ठूला उद्योगहरुलाई ‘डेडिकेटेड’ लाइनका नाममा कमसिन खाँदै बिजुली बेचेर आमनागरिकमाथि लोडसेडिङ थोपरिएको थियो । जसको रहस्यपछि मात्रै खुल्दै गयो ।
बिजुली प्राविधिकहरु मात्रै होइन, प्राधिकरणका कुनै पनि विभागले गम्भीरतासाथ कार्यसम्पादन गरिरहेका थिएनन् । पुगेसम्म मात्रै बिजुली वितरण गर्दा हुन्थ्यो । आपूर्ति व्यवस्थापनमा मास्टर स्टेसनका प्राविधिकलाई पनि खासै ‘वर्कआउट’ र ‘प्लान’ गर्नु पर्दैनथ्यो । उनीहरुले प्राविधिक रुपमा दिएका सुझाव सुन्ने काम पटक्कै हुँदैनथ्यो ।
यस्तै भद्रगोल र अव्यवस्थाका कारण प्राधिकरण घाटामा थियो । प्राधिकरणका कर्मचारी आफूलाई ‘विद्युत’को कर्मचारी भनेर सकेसम्म चिनाउँदैन थिए । उपभोक्ताको विश्वास प्राधिकरणमाथि एक रत्ति थिएन ।
अहिले अवस्था ठ्याक्कै उल्टो छ । देशभरबाट लोडसेडिङ हटेको छ । उद्योगमा पनि लोडसेडिङ छैन । नागरिकले सम्मान दर्शाउने सीमित सरकारी संस्थानमध्ये प्राधिकरण पनि एक बनेको छ । यहाँका कर्मचारीलाई आफ्नो संस्थाप्रति अहिले उच्च गर्वबोध छ ।
लोडसेडिङ अन्त्यले देशको आर्थिक वृद्धिदरमा खास सहयोग गरेको छ । लोडसेडिङ हुँदाको भन्दा अहिले औद्योगिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुध्रिएको छ । नागरिकमा जलविद्युतमा नेपालले केही गर्न सक्छ भन्ने विश्वास पलाएको छ । लोडसेडिङ हटेर यो अवस्था सिर्जना हुनु भनेको सर्वसाधारणको भाषामा एउटा चमत्कार नै हो ।
निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको विश्लेषणमा लोडसेडिङ हट्नुमा उपभोक्ताको बिजुली खपतको प्रवृत्ति बदलिनुले नै सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेलेको छ । प्राधिकरणले गरेको अपीललाई सहर्ष स्वीकारेर नागरिकस्तरबाट त्यतिबेला भएको सहयोगलाई कुलमान भुल्न सक्दैनन् । उनको भनाइमा सरकारको मार्गदर्शन, प्राधिकरणको टिम र सरकारी स्तरबाट भएको प्रयासले पनि लोडसेडिङको नामोनिशान मेटाउन सहयोग गर्यो ।
उनी भन्छन्–लोडसेडिङ हट्ने विषय कुनै चमत्कार थिएन । बिजुली एउटा विज्ञान हो, सही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चिज पनि हो । हामीले त्यही गरेका थियौं ।’
अहिले प्राधिकरण नयाँ नेतृत्व छ । अबको नेतृत्वलाई लोडसेडिङको चुनौती छैन । बरु कसरी बढी खपत गराएर देशभित्र उत्पादित बिजुली खेर जान नदिने भन्ने चिन्ता प्राधिकरणलाई छ ।
कुलमान नेतृत्वमा आएपछि बिजुलीको खपत दर बढेपनि ‘पिक डिमान्ड’को उच्चतम् व्यवस्थापन गरेकाले प्राधिकरणलाई लोडसेडिङ गर्नुपर्ने कुनै अवस्था नै छैन । तर, पवितरण प्रणाली कमजोर भएकाले झ्याप्प–झ्याप्प बिजुली जाने समस्या समाधान गर्न नसके नागरिकस्तरमा प्राधिकरणप्रतिको विश्वास गुम्ने जोखिम पनि छ ।